HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fang Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Ghomálá’ Gitonga Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Huichol Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Itawit Japoney Javaney Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kariba Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kituba Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laosianina Lari Latgalian Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lolo Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mangareva Maninkakan (Atsinanana) Mano Mapudungun Marathe Marquisien (Hiva Oa) Marquisien (Nuku Hiva) Marshall Masedonianina Maya Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Medumba Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Ngiemboon Nias Niue Norvezianina Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Pilagá Poloney Poméranien Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Shuar Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Susu Swahili Swati Sénoufo (Cebaara) Taabwa Tagalog Tahisianina Tailandey Tailandey Avaratratsinanana Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Boligara Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tyrewuju Tzotzil Télougou Udmurt Urhobo Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yap Yemba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Abrahama sy Saraha
Maro no mihevitra fa anarana fivavahana vaovao ny hoe Vavolombelon’i Jehovah. Efa 2 700 taona mahery anefa ny mpanompon’Andriamanitra no nantsoiny hoe ‘vavolombelony.’ (Isaia 43:10-12) Mpianatra ny Baiboly no nahafantarana anay talohan’ny 1931. Nahoana anefa no novana hoe Vavolombelon’i Jehovah ny anaranay?
Hahafantarana an’ilay Andriamanitra ivavahanay izany. Raha ny Baiboly mbola sora-tanana fahiny no jerena, dia niverina tao im-7 000 teo ho eo ny anaran’Andriamanitra hoe Jehovah. Nosoloan’ny mpandika Baiboly sasany hoe Tompo na Andriamanitra io anarana io, tatỳ aoriana. Andriamanitra mihitsy anefa no nilaza tamin’i Mosesy hoe Jehovah no anarany mandrakizay. (Eksodosy 3:15) Tiany haseho mantsy fa tsy mitovy amin’ny andriamanitra hafa izy. Faly àry izahay mitondra ny anaran’Andriamanitra!
Hahafantarana ny asa ataonay izany. Efa hatramin’ny ela no nisy “vavolombelona maro be” nampiseho fa nino an’i Jehovah. I Abela no voalohany indrindra, ary teo koa i Noa, Abrahama, Saraha, Mosesy, ary Davida. (Hebreo 11:4–12:1) Vavolombelon’i Jehovah toa azy ireny koa izahay. Hoatran’ny ataon’ny vavolombelona iray miaro olona tsy manan-tsiny any amin’ny fitsarana no ataonay. Miezaka mampahafantatra ny marina momba an’Andriamanitra mantsy izahay.
Manahaka an’i Jesosy izahay. Antsoin’ny Baiboly hoe “vavolombelona mendri-pitokisana sy marina” i Jesosy. (Apokalypsy 3:14) I Jesosy mihitsy koa no nilaza fa ‘nanambara ny marina’ momba an’Andriamanitra sy ‘nampahafantatra ny anarany’ izy. (Jaona 17:26; 18:37) Tokony hitondra sy hampahafantatra ny anaran’Andriamanitra koa àry ny tena mpanara-dia an’i Kristy. Izany mihitsy no ezahinay Vavolombelon’i Jehovah hatao.
Nahoana no novana hoe Vavolombelon’i Jehovah ny anaranay?
Efa hatramin’ny oviana i Jehovah no nanana vavolombelona?
Iza no Vavolombelon’i Jehovah lehibe indrindra?
Rehefa mifankahita amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ianao, dia miezaha hahafantatra azy kokoa. Anontanio, ohatra, izy hoe: “Fa maninona ianao no lasa Vavolombelon’i Jehovah?”
Ny Fampiasana ny Anaran’Andriamanitra sy ny Dikany
Nesorina tao amin’ny fandikan-tenin’ny Baiboly maro ny anaran’Andriamanitra. Nahoana? Tena zava-dehibe ve ny mampiasa ny anaran’Andriamanitra?